Izibhamu njengezilwane ezifuywayo | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izibhamu njengezilwane ezifuywayo - Izinzuzo
Ubani othembisa ukuba yisicabucabu njengesilwane, kufanele azi ukuthi akayena ithoyizi elidliwayo. I-spider ingakwazi ukubeka ngezikhathi ezithile esandleni, kodwa ngokuyinhloko isilwane sithanda ukuhlala okungaphazamiseki endaweni yokuhlala.
Uma isandla sifinyelela esitelekeni, lokhu kubangela ukucindezeleka ngenxa yezicabucabu, futhi isilwane singaluma. I-terrarium lapho kugcinwa khona isikhunta kumele ibe ne-footprint ye-30 × 40 centimeters. Ukuphakama kufanele kufinyelele ku-50 centimeters. Ngenkathi yokugcoba, isilwane akufanele sondliwe.
Uma kungenjalo, ukudla kwezicabucabu kunezinambuzane kanye nama-arachnids aphilayo, njengezintethe ezingathengwa ezitolo ezikhethekile. Ngaphezu kwalokho, njalo amanzi kufanele atholakale. Isimo sengqondo sezicabucabu silula. Izilwane azidingi ukushisa okunomsoco futhi kufana ne-bark mulch njengoba ngaphansi komhlaba.
Iziphi izigaxa ezifanele ukugcina?
Izilwane zasolwandle ezidume kakhulu njengezilwane, ziyi-tarantula ebomvu ye-chile, kanye nesicabucabu sezinyoni ezinobomvu kanye ne-Mexican red-knee tarantula. I-former yangamasentimitha amahlanu kuya kwanguyisithupha ubude futhi inokuthula futhi inamandla. I-tarantula ebomvu ye-chile ikhula kancane kancane futhi ihamba isikhathi eside nokudla. Ukudla okukhethwa yi-spider yendlu kuyinambuzane kanye namakhambi amancane.
Isigubhu esinombala obomvu esinamabala obomvu singumuthi wesibhakabhaka nesibhakabhaka seminyaka kuze kuphele iminyaka engu-15. Ukudla okukhethwa yilolu hlobo lwezinhlanzi kuyizintethe noma amaphuphu. Futhi, i-tarantula yaseMexico ebovu obomvu ithandwa kakhulu njengezilwane futhi ikakhulukazi ifanele abaqalayo njengesi-spider yokuqala. Uyondliwa ngamacricket noma izintethe.
Yini izinkopho ezibiza ngayo?
Kuye ngezinhlobo kanye nosayizi nezinhlobo, i-tarantula ibiza kuze kube yi-200 Euro. I-terrarium edingekayo ukuze i-spider igcine izindleko phakathi kwe-euro neshumi nanhlanu, kuye ngokuthi usayizi wayo. ukufika phansi, isikhunta se-15 ibhakede, izilwane zokudla eziphilayo.
Izipayipi zihlanzekile futhi zithule
Awudingi isikhala esiningi sokuhlala
Ukubuka izinkanyezi kuyamangalisa
Abantu abaningi bazizishaya izicabucabu futhi bane-arachnophobia yangempela. Noma ubani one-spider njengesilwane, kufanele alindele ukuvakashelwa, obuyela ekhaya kusuka ezinkimbeni ezinengekayo, "egijima" lapho. Ngedwa igama lesi-spider lidala ukukhathazeka okukhulu nokwesaba okukhulu kubantu abaningi.
Ngokuthungatha izinyembezi "abahlaziyi" abaqhaqhazela phansi, abaningi banamathele. Ngaleso sizathu akufanele njalo utshele isivakashi ukuthi unesicabucabu njengesilwane.